Dhakhaatiirta Caafimaadka ee guuleysta waxay tababbarka EMS ka helaan Jaamacadda Hodges
Categories: associate, EMS, Caafimaadka, Daryeelka caafimaadka, Hodges Connect, Halyeeyada Hodges
Ma dooneysaa inaad ku biirto Kooxda Elite ee #HodgesHeroes oo leh Shahaadadeena EMT, Shahaadada Paramedic, ama Barnaamijka AS - EMS Paramedic Degree?
Macno malahan heerka aad hada joogto, waxaan heysanaa dariiqa aan kugu caawineyno inaad ku guuleysato riyadaada ah inaad noqoto jawaabe koowaad. Si fudud u xul meesha aad hada taagan tahay waxaanan kaa caawin karnaa howsha bilow ilaa dhamaad.
Ma ku cusub tahay barta jawaabta ugu horreysa? Halkan Ka Bilaabo.
Haddii aadan khibrad / tababar ku lahayn EMS, EMT, ama Paramedic Field, ka dib ka bilow Farsamo yaqaanada Caafimaadka Degdega ah (EMT) CAnsixinta Barnaamijka waxaa lagu bixiyaa Hodges Connect.
5ta Sababood ee ugu Sareeya si aad u qaadato (aan ahayn amaah) Koorsada Shahaadada EMT oo ay la socdaan Hodges Connect oo ka tirsan Jaamacadda Hodges:
Xawaaraha Dardargelinta. Barnaamijkan waxaa lagu dhammayn karaa 7 toddobaad, taas oo ah kala bar wakhtiga ay bixiyaan barnaamijyada kale ee maxalliga ah. Waxaan haynaa lix koox oo la heli karo:
Oktoobar 18, 2021 - Diseembar 12, 2021 (qof ahaan)
Janaayo 24, 2022 - Maarso 13, 2022
Maarso 28, 2022 - 15dii Meey, 2022
Juun 6, 2022 - Julaay 24, 2022
Ogast 8, 2022 - Sebtember 25, 2022
Oktoobar 17, 2022 - Diseembar 11, 2022 (ka boodi usbuuca Thanksgiving)
Dabacsanaanta Caafimaadka. Shuruudaha bukaan socod eegtada iyo tababbarka waxaa lagu dhammaystiri karaa labada xarumood ee Lee ama Collier.
Dabacsanaanta Shift Shuruudaha caafimaad iyo tababbarku waxay dhacayaan inta lagu jiro dhammaadka usbuuca iyo saacadaha fiidkii.
Bixinta Barnaamijka Loo Dhan Yahay. Cusboonaysiinta CPR iyo kaalmaynta shaqo ayaa ka mid ah adeegyada lagu bixiyo koorsadan.
Fududeyn. Barnaamijkani uma baahna isqorista dhaqanka ee Jaamacadda. Looma baahna in la buuxiyo FAFSA! Kaliya bixi $ 100 ee deebaajiga aan la soo celin karin (kaas oo lagu dabaqi doono waxbarashada haddii aad qaadato koorsada) si aad u bilawdo hawsha, oo xitaa waxaad u qalmi kartaa kaalmada waxbarashada kharash yar ama aan lahayn iyada oo loo marayo CareerSource. Si aad u ogaato inaad xaq u leedahay, buuxi an foomka weydiinta iyaga la bilaabo hawsha u-qalmitaanka.
Haddii aad u-qalanto maalgelin buuxda oo ka socota CareerSource, uma baahnid inaad bixiso deebaaji si loo hubiyo in aad ka mid noqoto barnaamijka (aqbalaadda ka dib), kaliya ogeysiiska ka soo baxa CareerSource ayaa ku filnaan doona boos kaaga. Marka, hubso inaad dalbato maanta si aad ugu xaqiijiso aqbalaaddaada barnaamijka!
Saxiix maanta si aad uhesho booskaaga kulankeena soo socda!
Halkan Guji si aad ulaxariirto Wakiilkaaga Hodges EMT Maanta Si Aad U Codsato!
Ma dooneysaa Shahaadada Dhakhaatiirta aan lahayn shuruudaha waxbarashada guud?
Our Barnaamijka Shahaadada Caafimaadka waxay noqon kartaa waxa aad raadineyso!
Barnaamijka shahaadada caafimaadka waxaa loogu talagalay in ardayda la siiyo xirfado heer-gelitaan iyo aqoon ay ugu shaqeeyaan sidii shaqaale caafimaad oo ka socda Gobolka Florida. Qalin jabiyayaashu waxay xaq u yeelan doonaan inay qaataan imtixaanka shahaadada Gobolka Florida ee looga baahan yahay inay ku tababaraan goobta. Ardaydu waxay diyaar u yihiin shaqooyinka caafimaadka degdegga ah ee cisbitaalka kahor taas oo u oggolaanaysa ardayda qalin jabisa inay u shaqeeyaan sidii kalkaaliyayaal caafimaad oo goobo kala duwan ah, sida waaxda badbaadinta dabka, adeegyada ambalaaska dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, iyo adeegyada caafimaadka aero, isbitaalada, iyo waaxaha booliska. . Ardaydu waxay aadi doonaan casharro iyo fasallo shaybaar, isbitaal caafimaad iyo layliyo ambalaas. Barnaamijka shahaadada saacadda amaahda ee 42-saac ayaa lagu dhammayn karaa saddex kal-fadhi oo isku xiga. Isqoris xaddidan ayaa la heli karaa. Codso Maanta!
* Barnaamijka kaaliyaha caafimaad wuxuu leeyahay diiwaangelin xaddidan sababo la xiriira tas-hiilaad caafimaad iyo heerarka aqoonsiga. Shuruudaha gelitaanka waxaa ka mid ah shahaadada hadda jirta ee Florida EMT-Basic, shahaadada CPR ee hadda socota, dhammaystirka qanacsanaanta ee tallaalka iyo warbixinta caafimaadka, iyo dhammaystirka qanacsanaanta ee la-talinta asalka dambiyada ee kulliyadda la oggolaaday oo lagu dhammaystiray kharashka codsadaha.
Diyaar ma u tahay inaad kasbato shahaadadaada?
Miyaad horey u haysatay shahaadada Florida ee EMT iyo dhibco kulliyadeed oo hore ama shahaado? Hadday haa tahay, markaa tallaabada xigta waxay noqon doontaa in lagu dalbado Jaamacadda Hodges isla markaana lagu qiimeeyo qoraalkaaga la-taliyahaaga oggolaanshaha shaqsiyeed si loo hubiyo inaad haysato shuruudaha looga baahan yahay Barnaamijka Darajada Caafimaadka ee Paramedic. Ha welwelin, haddii sababo jira awgood aadan haysan ama kugu filan dhibcaha barnaamijka, lataliyahaaga aqbalidda ayaa kugula socon kara tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato inaad ku bilowdo Barnaamijka Shahaadada Caafimaadka.
Haddii aadan haysan shuruudaha looga baahan yahay, ha ka welwelin, way fududahay inaad dalbato inaad buuxiso shuruudaha guud ee waxbarashada ka hor intaadan qaadan Barnaamijka Darajada Caafimaadka. La-taliyahaada oggolaanshaha ayaa kaa caawin kara inuu kugu dhex maro hawshan.
Maxaad u Xultaa Hodges U?
Ansixin Barnaamijka Caafimaadka ee Jaamacadda Hodges waxaa ansixiyay Waaxda Caafimaadka Florida. Dhammaan tilmaamtu waxay buuxineysaa shuruudaha xeerka maamulka Florida, Cutubka 64J Adeegyada Caafimaadka Degdegga ah.
Warqadda Dib u Eegista. Barnaamijka Hodmed University Paramedic waxaa soo saaray Warqad Dib-u-eegis ah oo ay soo saareen Guddiga Aqoonsiga Barnaamijyada Waxbarashada ee Xirfadaha Adeegyada Caafimaadka Degdega ah (Xafiiska Fulinta ee CoAEMSP). Warqadani maahan xaalad aqoonsi CAAHEP, waana xaalad tilmaamaysa in barnaamij raadinaya aqoonsi bilow ah uu muujiyey u hoggaansamid ku filan Heerarka aqoonsiga iyada oo loo marayo Warqadda Dib-u-eegista Warbixinta Is-qorista (LSSR) iyo dukumiintiyo kale. Waraaqda Dib-u-eegista waxaa aqoonsan Diiwaanka Qaranka ee Farsamayaqaannada Caafimaadka Degdegta ah (NREMT) ee u-qalmitaanka qaadashada baaritaanka (yada) NREMT ee Aqoonsiga Paramedic. Si kastaba ha noqotee, MA ahan damaanad qaad aqoonsi ugu dambayn.
Dabacsanaan. Jadwalka fasalka-saaxiibtinimada u habboon si loo dejiyo kuwa hadda shaqeeya.
Baro Jidkaaga. Ardaydu waxay ku qaadan karaan koorsooyinkooda waxbarasho guud kambaska ama khadka tooska ah.
Diyaargarowga Qalin-jabinta Qalinjabiyeyaashu waxay xaq u leeyihiin inay u fariistaan ​​imtixaanka aqoonsiga NREMT *
Ka sii Fog Qalin jabiyayaashu waxay kasbadaan shahaadada AS, taas oo ah dariiqa loo maro shahaadada Bachelor-ka ee sayniska ee Sayniska Caafimaadka iyo Maamulka Adeegga Caafimaadka.
* Marka si guul leh loo dhammeeyo barnaamijka AS degree EMS-Paramedic Program, ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay u fadhiistaan ​​imtixaanka shahaadada Qaranka ee Farsamayaqaannada Caafimaadka Degdegta ah (NREMT). Ka dib markay gudbaan imtixaanka NREMT, ardaydu waxay xaq u leeyihiin shahaadada Florida sida Paramedic waxayna diyaar u yihiin inay ku biiraan kooxaha daryeelka caafimaadka meelo kala duwan, sida waaxda badbaadinta dabka, adeegyada ambalaaska dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, adeegyada aeroomikada, isbitaalada, iyo waaxaha booliska.
Sii Dhaw Tag Far. Jaamacadda Hodges
Codso Ogolaanshaha Barnaamijka AS EMS
AS EMS & Heerka Degree Paramedic
Bixi Miisaanka iyo Macluumaadka Muuqaalka Shaqada
Yoolalka Qalin-jabinta ee Barnaamijka Kalkaaliyaha Caafimaadka
Kevin Nelmes, Abaalmarinta-Ku-guuleysiga Hodges Graduate iyo Adjunct Professor
Muddo dheer kahor inta uusan Kevin Nelmes helin jaamacada Hodges iyo barnaamijkeeda maaraynta, wuxuu dhisay 20 + sano shaqo ah amniga gaarka ah, daawada taatikada, iyo baaritaanka walxaha qarxa ee lala shaqeeya K9s. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu ku qaatay 15 sano oo uu ka shaqeynayay (EMS) Southwest Florida wuxuuna qaatay taariikhdiisa waxbarasho ee maaraynta wuxuuna u adeegsaday hab gaar ah oo lagu koriyo shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba, dhammaantood isagoo sii wadaya inuu caawiyo dadka kale ee baahan.
Marka la isku daro khibradiisa, waxbarashadiisa, iyo khibradiisa shaqsiyadeed, Nelmes wuxuu intiisa badan waqtigiisa ku qaataa waxbarista ururada sida Special Operations Medical Association (SOMA), Urban Shield, Ururka Qaranka ee Dhakhaatiirta Caafimaadka Degdega ah (NAEMT), Xakamaynta Xannaanada Takhasuska ee Tactical (TCCC) , Daryeelka Dhibaatada Degdega ah ee Tactical (TECC), iyo Guddiga TECC / K9-TECC Working Group.
Intaa waxaa dheer, kaliya ma aha inuu sii wado inuu u shaqeeyo dabka maxalliga ah iyo EMS, laakiin wuxuu ku soo noqday macallinkiisa bishii Ogosto 2017 si uu ugu adeego xubin xubin ka ah macallimiinta.